Fifidianana : Voaporofo ny hala-bato, hoy ny KMF/CNOE -
AccueilRaharaham-pirenenaFifidianana : Voaporofo ny hala-bato, hoy ny KMF/CNOE
05/01/2019 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Nanamafy tamin’ny fitoriana napetrany ny KMF/CNOE, fa nisy ny hala-bato nahavariana tamina kaomina efatra teto Madagasikara, nandritra ny fifidianana filoham-pirenena farany teo. Tsara ny manamarika aty am-boalohany fa isan’ny nanara-maso ny fifidianana tamina distrika miisa 114, niaraka tamin’ireo fiarahamonim-pirenena hafa tahaka ny liberty 32 sy ny justice et paix. Isan’ny nisintona ny sain’ ny KMF/CNOE ny zava-nitranga tany amin’ny kaomina Komajia distrikan’i Mampikony, izay nisian’ny asan-dahalo no anton’ny tsy nisian’ ny fifidianana tany an-toerana. Nahagaga anefa hoy ny KMF/CNOE, fa naharaisana voka-pifidianana tamin’ireo biraom-pifidianana roa amin’efatra ireo. “Nambara taminay fa niverina nisokatra ireo biraom-pifidianana tany an-toerana tamin’ny efatra ora, ary nahita mpifidy hatrany amin’ny zato izany. Izany anefa dia sarotra ihany raha ora iray monja no ahita ireo mpifidy ireo, satria ny olona iray mandatsa-bato dia vinavinainy ho telo minitra anaty biraom-pifidianana”, hoy hatrany ny filohan’ ny KMF/CNOE. Gaga ihany noho izany ireo mpanara-mason’ny fifidianana, izay tany an-toerana manoloana ity zava-nitranga.
Mangataka ny KMF/CNOE, ny amin’ ny tokony hanafoanana ny voka-pifidianana ao amin’ io kaomina io. Indrindra fa nisy ireo vavolombelona sahy nijoro fa tsy nisy ny fifidianana, ary nahagaga ihany koa ny taham-pandraisana anjaran’ny kaomina ambony dia ambony, izay vao avy nisedra fanafihan-dahalo. Tsy miafina intsony noho izany ny zava-nitranga tany amin’ity tanàna ambanivolo ity, ary tsy menatra ny hijoro vavolombelona ihany koa ireo mponina tany an-toerana. Manoloana ireo zava-mitranga ireo dia nanambara ny KMF/CNOE, fa efa am-pelatan’ny fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana ny fitarainana. Noho izany andrasana ny fanapahan-kevetr’ity fitsarana mahefa momba ny fifidianana ity. Eto izany dia ireo mpanara-maso ny fifidianana mihitsy no milaza sy nanamarina ny zava-nisy tany amin’io kaomina Komajia io, tamin’ny hala-bato. Mazava ho azy fa ho azy fa ny kandidà izay nahazo vato betsaka tao amin’io kaomina io izany no nanao ny hala-bato. Andrasana ny mety ho fitsarana avoakan’ny HCC mikasika izao halatra be vava nisy teto amin’ ny firenena izao.